Ngaba ndinako icebo leengcebiso ezivela kwi-Amazon uluhlu lobungcali?
Uninzi lwethu (ukuba singatshoyo zonke iincwadana ze-Amazon uluhlu) uyazi ukuba le ndawo yemarike ekhompyutheni ekhompyutheni ibaluleke kakhulu kwinjini yokukhangela yomkhiqizo. Kwaye into leyo kukuba i-Amazon mhlawumbi iyona ndawo inkulu yoluhlobo oluthile olutholakala kwiWebhu. Kuthetha ukuba inqanaba eliqhelekileyo lokuncintisana kweemarike lona lukhulu kwaye lugonyamelo. Ngoko, njani ukusinda phantsi kwimeko enjalo engathandabuzekiyo yezinto ezilawulayo kwi-marketplace yama-Amazon? Ewe, ndiyakholwa ukuba intloko yokuphumelela ngentengiso kwi-Amazon ibhekiselele ngokukodwa kwintengiso yegama lakho elifanelekileyo ekujoliswe kuyo kwi-intanethi ukuze ufumane ukubhekiseleleka kwi-intanethi kwinto efunyenwe kuyo. Kwaye ngezantsi kuneengxelo ezinengqiqo kunye neengcinga ezihlakaniphile ezivela kwi-Amazon udidi lweengcali ukuqhuba ukulungiswa kwekhasi lakho kwinqanaba elitsha.
Iingcebiso kunye neengcali ezivela kwi-Listing i-Amazon Ingcali
Okokuqala, masijongene nayo - ukulungiswa kwemveliso yakho yenkqubo eqhubekayo ekupheleni - chile vacation packages all inclusive. Ndiyathetha ukuba ii-Amazon Best Sellers kunye nomgangatho wazo oqhelekileyo wokubala ukubaluleka ngokwenene kusekelwe kwinkqubo yokuthengisa ngokubanzi, idibaniswe nendlela efanelekileyo yokubeka uluhlu lwemveliso yokukhangela kwento. Kwaye le nto kukuba ukubala kokuqala kokuhlawula rhoqo kuhlaziywa ukwenzela ukuba ihlaziywe ngeyure nganye kwaye ibonakalise yonke imbali yentengiso yakutshanje yeemveliso ezithengiswa ngaphaya kwelo. Kwaye nakhu iingcebiso ezibalulekileyo kunye namaqhinga okungaziwa kuphela ngeengcali zonke ze-Amazon, kodwa ngabo bonke abathengisi be-intanethi abanomdla banikela naluphi na uhlobo lwezinto ezithengiswayo. Ngoko, nantsi into omele uyazi malunga nokulungiswa kwemveliso ye-Amazon, ngokufutshane.
Kuthathwe ngokubanzi, unento ethile malunga neekrasi ezingama-50 zokuzalisa ngasinye sesicandelo sakho sokusesha ezintlanu. Kwaye into eyinzima kakhulu apha usebenzisa le miqathango yempawu ngokuhlakanipha kwaye wenza konke okusemandleni akho ukudala imiqathango emininzi yokukhangela imilenze edeleyo.
Amazwi okuPhendwa ngabanye (angabikho amagama)
Ukubuyiselwa kukuphakathi kwezinto eziphambili zezinto zokucinga ezifunyanwa yii-Amazon zonke, ukubonisa uluhlu. Kodwa ke, phawula ukuba idijithi yemidlalo ecacileyo nayo yinto enamandla kakhulu (ngokusekelwe kwiikhompyutheni ze-Amazon ezisemthethweni).
Nazi ezinye izinto ezinamandla (ngaphandle kohlobo lombuzo ochanekileyo). imbali yokuthengisa jikelele;
2. inkqubela phambili yentengiso (yenyanga, ngeveki, njl njl. );
3. intengo yemveliso yokhuphiswano kunye nokukhethwa;
4. ukufumaneka kwangoku.
Imigqaliselo yokuPhendla kwexesha elide
Musa ukuchitha ixesha lakho kunye nomzamo wokusebenzisa nanoma imuphi umsila omde okanye amagama ophando olunexesha elifakwe kwisihloko sakho somkhiqizo, kunye nohlu lweengqungquthela zebhola kwiphepha lakho lemveliso.
Zive ukhululekile ukuqwalasela nayiphi na impawu ezihambelanayo kunye neendidi ezahlukeneyo zegama le-LSI, ezinokusetyenziswa ngabathengi abaninzi abaphilayo befuna enye imveliso.
Kungcono ukuba ugweme ukusebenzisa amanqaku okucaphuna, ngokuqhelekileyo kuba oku kuya kunqumla ubude bakho obude bubekwe bucala kwiqendu ngalinye lekhasi lomkhiqizo.
Musa ukuzikhathaza ngezinye iimpawu zokubhaliweyo, ubuninzi / ubuninzi, kunye naluphi na uhlobo olufana nolwimi olunxulumeneyo - i-Amazon ithi imizamo enjalo iya kuba yinto engenakuncedo, kuba i-injini yayo yokukhangela isebenza ngokufanayo nale midibaniso ngendlela efanayo.